Gaa Leta Belfast na Dublin | Akụkọ Njem
Nleta Belfast na Dublin
Na mbido izu a anyi kwuru maka ị gaa London na Edinburgh. Etu ị ga - esi mee ka obodo abụọ ahụ dịrị n’otu na ihe ị ga - eleta na nke ọ bụla. Echiche bụ ịgagharị obodo ndị bụ isi na United Kingdom.
Taa bụ oge nke Belfast, isi obodo Northern Ireland, ma ebe ọ bụ na anyị abanyelarị na Emerald Isle, ihe dị mma bụ ịga n'ihu, hapụ UK ma gaa Dublin n'ihi na obodo Irish abụọ dị ezigbo nso ma nye anyị panorama sara mbara nke eziokwu nke agwaetiti ahụ. Kedu ka anyị si Edinburgh gaa Belfast, kedu ihe anyị hụrụ ebe ahụ na kedu ka anyị ga-esi gaa njem anyị na Dublin?
Ọ bụ isi obodo Northern Ireland ma nwee akụkọ ihe mere eme jikọtara ya na ogige mmiri, ebe a ka ewuru Titanic, imepụta ụdọ na nhazi ụtaba. Obodo nke sonyeere na Industrial Revolution na nke nwere ezigbo njọ n'oge esemokwu na ndị IRA na ndị Irish nwere onwe ha.
Ruo oge ụfọdụ ugbua ihe dị jụụ ma obodo ahụ agafeela ụdị ebuli ihe mara mma nke mere ka ọ bụrụ njem nleta na ebe mara mma. Kedụ ka ị ga esi aga Belfast si Edinburgh? Ihe mbụ ị kwesịrị ịma bụ na e nwere osimiri n’etiti ya, yabụ na ihe ọ bụla ọ bụ, ị ga-agafe ya. A) Ee, thezọ kachasị ọsọ bụ ụgbọ eluEnwere ụgbọ elu ndị dị ọnụ ala na-ewe ihe dị ka elekere ma ọ bụ obere. Easyjet, dịka ọmụmaatụ.
Conventionzọ a na-ahụkarị ma ọ bụ nke a kacha mara amara dị mgbe ọ bụla site na ọdụ ụgbọ mmiri Scottish nke Stranraer mana afọ ole na ole gara aga ụlọ ọrụ ahụ nyere tiketi jikọtara (ụgbọ ala + ụgbọ mmiri), Stena Lines, si na ọdụ ụgbọ mmiri a dị mma na ebe ị rutere n'ụgbọ okporo ígwè , n'ọdụ ụgbọ mmiri Cairnryan. N'ihi ya, ọ dịghị ọzọ karịa were ụgbọ oloko ahụ na Edinburgh gaa Ayr, yana njikọ na Glasgow, wee si ebe ahụ banye ụgbọ ala gaa n'ọdụ ụgbọ mmiri Cairnryan. Rygbọ mmiri ga-ewe ihe dị ka elekere abụọ.
Stena Lines na-enye ụgbọ mmiri abụọ, Stena Superfast VII na Stena Superfast VIII. Ha na-agafe Osimiri Irish ruo awa abụọ na nkeji iri na ise na-enwe ọrụ isii kwa ụbọchị. Enwere WiFi na ụgbọ na ụlọ oriri na ọ restaurantụ .ụ. Site n'ụtụtụ anọ ị nwere ike ịga njem mana gbalịa ịbịarute otu awa tupu mgbe ahụ n'ihi na ụfọdụ ndị njem nleta ahụla ka ụgbọ mmiri ha hapụrụ n'oge gara aga karịa oge a kapịrị ọnụ.
Na Belfast ọ ga-atụpụ gị na ọdụ ụgbọ mmiri nke ya ma ị nwere netwọk Translink n'aka, na-ejikọ ụgbọ ala, ụgbọ oloko na metro, iji gaa n'etiti Belfast. Ọ bụrụ na ịchọrọ iji tagzi, gbakọọ njem site na 9 pound. Lọ ọrụ ndị ọzọ bụ P&O Irish Sea na Isle of Man Steam Packet Company.
Ọ dị mma ugbu a Kedu ebe nkiri ndị njem nleta Belfast na-enye anyị? Tụlee Titanic, Game nke n'ocheeze, bụbu ụlọ mkpọrọ, chọọchị dị iche iche, nnukwu ụlọ, ubi na ebe ngosi ihe mgbe ochie. Dika anyi kwuru na mbido n’ime ugbo mmiri nke Belfast ewuru Titanic ya mere odi nkpa. A na-akpọ mma ahụ Titanic Belfast ọ na-esikwa na etiti obodo ahụ pụta: ọ bụ ụlọ nwere okpukpu isii yana veranda iteghete na-emekọrịta ihe onyonyo, ụda, aromas na akụkọ ihe niile metụtara ụgbọ a ma ama.
Emechaa ị nwere ike ịga leta ụgbọ mmiri site n'otu oge ahụ, SS Nomadic. Agaghị ịgụ nleta a tiketi ahụ na-efu £ 17 kwa okenye ma ọ bụrụ na ịzụta izu 25 gafere ị nwere: Titanic, SS Noamdic, Discovery Tour na ihe ncheta foto. Ọzọ? Nwere ike ị teaụ tii na Sọnde na okomoko nke Titanic, ubube na ihe niile! Maka £ 24 ọzọ.
Na ọtụtụ ọnọdụ na Northern Ireland, akụkụ nke Egwuregwu nke ocheeze na kwa na Belfast Studios. Ihe niile bụ ihe ọzọ ma ọ bụ obere nso ma ị ga-debanye aha maka njegharị ịmara ha n'ihi na ụlọ ọrụ na-ejikọta HBO n'ụzọ ụfọdụ. Ma ị nwere ike ịga na Lọ Ward nke n'usoro bụ Winterfell, ndị mara mma Okporo ụzọ eze na ọtụtụ ntọala eke.
La Mkpọrọ Crumlin Road Ọ bụ otu n'ime ụlọ mkpọrọ kacha mkpa na narị afọ nke 150. Ọ na-enye njem nlegharị anya, ihe omume na egwu. Emeghere ya maka afọ 70 na ọtụtụ ndị mgbanwe Irish na-ata ahụhụ ha ebe a. Njegharị a na-ewe nkeji iri asaa ma saịtị ahụ mepere kwa ụbọchị n’izu n’afọ niile ma ewezuga ekeresimesi, Disemba 26 na Afọ Ọhụrụ. Ọ na-efu pound 9 kwa okenye.
I nwekwara ike ileta Katidral Belfast, Churchka Santa Ana, Anglịkan na Irish, ụlọ nsọ ndị Romeesque nwere arches na ogidi, windo ndị toro ogologo na mosaics mara mma. Nleta ahụ na-efu 5 pound na 6 ma ọ bụrụ na ịgbazite ndu ndu. Na Elflọ Belfast Ọ bụ ụlọ obibi nke ụlọ obibi nke ụlọ ochie na ihe dị mma bụ na ọ dị nso na Cave Hill ka echiche obodo ahụ na ọdọ mmiri ahụ dị ukwuu ma na-atụ aro ya.
Ugwu ugwu A na-akpọ ya n'ihi na ọ nwere ọgba ise na ọnụ ọnụ ugwu ma site na ha akụkụ dị mma nke akụkọ ntolite obodo ahụ agafeela. E nwere ogige nwere ebe ihe ochie, ụzọ ụkwụ, ubi, oke ọhịa na ụlọ oriri na ọ .ụ .ụ. Ọzọ iconic ụlọ ke obio bụ Halllọ Nzukọ Obodo Belfast, ochie, nke dị na Donegall Square. Njegharị gị bụ n'efu site na Mọnde ruo Sọnde na 11 nke ụtụtụ, 12 na 3 elekere na ngwụsị izu na etiti ehihie na 2 na 3 pm.
Bọchị ole na ole na Belfast zuru. Eleghi anya ọ bụrụ na ị debanye aha maka njegharị gburugburu ya, ha kwesịrị ịbụ ụbọchị atọ ma ọ bụ karịa (ọ bụrụ na ị gaa na Kilkenny, Newgrange, Trim, Wicklow, Howth), mana ọ ga-abụ oge isi gaa Dublin.
Njem a si Belfast gaa Dublin na-ewe ihe dị ka awa abụọ ma enwere ike iji ụgbọ ala ma ọ bụ ụgbọ oloko mee ya. Traingbọ oloko ahụ nwere ụzọ dị mma karịa ma ị nwere ọrụ site na isii nke ụtụtụ. Ahịa dị n'etiti euro 20 na 24, karịa ma ọ bụ obere. Ha ga-ebuga gị na ọdụ Dublin Connolly, nke dị n’ebe etiti, ma pụọ ​​na Belfast Central. Gbakọọ otu ugboala otu ụgbọ oloko kwa awa abụọ ma ọ bụrụ na ị nweelarị njem ahụ, ọ ga-adị mma ịzụta ha n'ịntanetị tupu n'ihi na ha dị ọnụ ala karịa ịzụta ha n'otu ụbọchị.
I nwekwara ike iburu bọs, oru ndia na adi otutu oge. Ebe ọdụ ụgbọ ala Belfast dị nke ọma, na etiti ya, ebe mara mma dịkwa mma. Eziokwu bu na Dublin bu obodo mara mma ma di nma karie Belfast ma i gha hu ya n’anya ozugbo.
Ahapụrụ m gị ebe a ụfọdụ ebe nlegharị anya nke Dublin:
Guiness houselọ Ahịa: njem nke ebe omume biya bụ kpochapụwo na mgbe niile na-agwụ na a mmanya, ike ndọda, si ebe ị nwere a ikenyeneke mbiet echiche nke obodo.
Akwụkwọ nke KellsEdere akwukwo a na gburugburu 800 AD ma buru ezigbo akwukwo nke mara nma nke oma na akwukwo nso, obu na Atọ n’Ime Otu.
National Gallery nke Ireland. Ọ bụ ọmarịcha saịtị nwere ihe karịrị 2500 eserese na agba mmiri, eserese, mbipụta na ihe osise. Enwere ndị omenkà ama ama dịka Monet, Van Gogh ma ọ bụ Picasso.
Katidral Saint Patrick: E wuru ya na narị afọ nke 700 na ọ bụ otu n'ime ụlọ ochie ndị dị na obodo. Enwere ihe dị ka ili XNUMX n'ime ya, gụnyere nke onye dere ya Njem Gulliver, Jonathan Swift.
National Museum nke Ireland. Ọ bụ ụlọ ihe mgbe ochie na-enye gị ohere ịmụ banyere akụkọ ihe mere eme nke agwaetiti ahụ site n'oge ochie, site na mwakpo Viking ruo taa.
Mkpọrọ Kilmainham: Ọ bụ ụlọ mkpọrọ ochie nke obodo ahụ ma nwee akụkọ dị egwu na akụkọ gbara ọchịchịrị. Ọ bara uru ịme njem nlegharị anya.
Old Jameson Distillery. Key na-amasị wiski? Nke a bụ njegharị kachasị mma n'oge niile.
Sterlọ ahịa akwụkwọ Chester Beatty.
N'ebe ndị a, gbakwunye na hop na njem ụgbọ ala, nke enwere ike ijikọta ya na nnukwu ụgbọ oloko na nleta mmanya na-aba n'anya. temple Bar, ebe publọ irish kpasuru iwe na Europe. Bọchị atọ na Dublin dị mma mana ọ bụrụhaala na ị ga-anọ ogologo oge ọ bụla, ọ ka mma. Ga-enwe ike ịmekwu njem ma ọ bụ gbaa onwe gị ume ịhazi njem dị ogologo.
Ebe ọ bụla na Emerald Isle, n'ebe ugwu ma ọ bụ n'ebe ndịda, ga-enye gị ọmarịcha ala, akụkọ ihe mere eme na ọdịbendị siri ike ichefu.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akụkọ Njem » Nkechi » United Kingdom » Nleta Belfast na Dublin
Ihe ị ga-ahụ na Bordeaux maka izu ụka